TalkBack Android Ndeipi uye ndeyei? Pop ➡️ Android Pop ▷ ➡️
TalkBack Android Ndeipi uye ndeyei? Kune vashandisi vane hurema hwekuona kana mota, Google Talkback uye iyo Zvishandiso zvekushandisa zveApple Vanobatsira. Icho chaicho chiri chisumbu che mafomu ayo Google yakagadzira kupa vanhu vakaremara maturusi anobatsira kuyanana neApple Smartphones uye mapiritsi. Ngatitorei nekukurumidza tione zvavari, mashandisiro awo, uye nei achikosha.
Yakagadzirwa uye yakagadzirwa chaizvo neiyo Chinangwa chekutsigira vakaremara vashandisi mukushandisa nhare mbozha, iyo Android Accessibility Tools, iyo inosanganisirawo Google Talkback, ipakeji rezvishandiso zvinogona kutorwa pasi kubva kuGoogle Store uye zvinoshanda pane chero Android Smartphone kana piritsi.
Izvo zvine zvina zvinoshandiswa, maviri ane mabasa e kuverenga izwi (Google Talkback uye Sarudza kuteerera), Menyu yekuwanika yekusununguka kwekushandisa mamwe mabasa eSmartphone uye Chinja Kuwana kuita seimwe nzira kune inobata skrini, nekuda kwekubatana kwema sensors nekunze kutsigira kwevashandisi vane matambudziko ekufamba. Ngatione mashandisiro acho.
Mashandiro anoita Google Talkback: yekuwanika menyu uye nekuvandudza kuwanika
Kutora mukana we Zvishandiso zvekushandisa zveAppleUnofanirwa kutanga wavhura marongero echishandiso woatsvaga muchikamu che "Kuwanika", iko kunowanikwa Google Talkback uye akasiyana mafomu ari kubvunzwa. Pedyo nebasa rega rega ipfupiso yemabasa acho nemamwe mapoinzi anotsanangura mashandisiro ekushandisa akasiyana maitiro
Ngatitangei neiri nyore basa. Menyu yekuwanika. Sezvo iwe uchigona kufungidzira kubva kuzita rebasa racho pacharo, iri inodzoreka menyu iyo inobvumidza mushandisi kuve neakanyanya epamberi mashandiro eSmartphone. Inomiririrwa nemifananidzo pane mapfupi ekugadzirisa kupenya uye kurira nemabhatani akasarudzika anoderedza kana kuwedzera hunhu neimwe huwandu, kukiya iyo skrini yefoni, kudzima kana kutangazve iyo Smartphone, kuvhura chidzitiro chekuzivisa, che capture screen nezvimwewo.
Kana ichishanda, iyo yekuwanika menyu inogona kudaidzwa kumusoro kukwidza kuburikidza ne icon mune yepasi yekufambisa bar (iyo ine mabhatani edhijitari ekujekesa). Kubva ipapo zvinogoneka vhura kana kuvhara menyu neiyi nzira pfupi uye kumashure, kuwanda uye kutanga mirairo inoonekwa padivi payo, kunyangwe iyo iyo Smartphone painogadzirirwa nekushandisa kwese screen skrini.
Zvirokwazvo zvakanyanya kukosha ndizvo Chinja Kuwana, chishandiso chakagadzirwa neGoogle chinoshanda senge imwe nzira yekubata skrini.
Izvo zvinopa vashandisi kugona wedzera ma sensors ekunze kana zvishongedzo zvekushandisa nazvo Smartphone. Iyo yakanyatsogadzirirwa vashandisi vane hurema hwemotokari avo, nekuda kwekubatana kwezvishandiso zvekunze senge chaiwo makhibhodi, mabhatani kana vamwe, inogona kudyidzana neiyo Smartphone kana piritsi usingaende kuburikidza neyekushandisa kwekare kuburikidza neyekubata skrini.
Mashandisiro aungaita Google Talkback uye Sarudza kuteerera
Zvino tauya ku Google Talkback maficha and the mamwe maratidziro eApple ekushandisa ekushandisa ekuona emapofu kana ekusaona zvakanaka. Mune zviitiko izvi, basa rakafanana ne "Sarudza kuteerera”Inonyanya kubatsira kusisitimu kuverenga zvinhu zvakasarudzwa zvechiso. Pane imwe nguva yakashandurwa, zvakare kubva muchikamu che "Kuwanika" mumashandisirwo eSmartphone ", mushure megwaro pfupi rinotsanangura mashandiro aro, rinogona kushandiswa nenzira yakafanana neiyo" Yekuwanika menyu ".
Muchokwadi, tinoiwana mune yepazasi yekufambisa bar, mune inoenderana icon iyo, kana ikabatwa, inovhura padivi menyu ine akasiyana mirairo.
Kudzvanya "tamba", iyo system inoverenga yega zvese zvinoratidzwa pachiratidziri, basa rinogona kutarisirwa uchishandisa mabhatani ekumberi nekumashure kufambisa kuchinhu chakazotevera kana chatoverengerwa.
Izvo zvakare zvinogoneka gadzira kumhanya kwekuverenga kuburikidza nemirairo yehukama. Pane kudaro, kugadzirisa zvese zvakazvimiririra, ingobata chimwe kana zvimwe zvinhu nekukweva chigunwe chako pachiratidziro chebasa kuti uverenge izvo zvakasarudzwa. Iine iyo kamera inoshanda, chokushandisa zvakare anogona kuverenga zvinyorwa izvo zvinoonekwa mukati mefuremu.
Zvino tasvika Google Talkback, An Aapplication inobvumidza mushandisi wemaziso kuti aonane neiyo Smartphone pasina kutarisa pachiratidziri. Kamwe painomisikidzwa, inoverenga uye inotsanangura zvese zvinoonekwa pachiratidziri, zvichikubvumidza iwe kuti utarisire akasiyana mashandiro nezwi rekuverenga system yakafanana neyekutanga chikumbiro, iine vibration senge rutsigiro.
Kekutanga nguva patinovhura Google Talkback, mushandisi anotungamirirwa kuburikidza nemuyedzo wezve manejimendi mashandiro eSmartphone.
Izvo zvinokwanisika kufamba nemabasa efoni uye mamamenyu neiri rinoita sevhisi nekutsvedza zvigunwe zviviri pamwechete pachiratidziri. Kubaya chinhu, kune rimwe divi, kunomutsa kuburitswa kwezwi kwechinhu chakasarudzwa, nepo pombi yakapetwa kaviri ichiita chinhu chimwe chete (kuvhura application kana kudzokera kumenu, semuenzaniso).
Inoenderana Midziyo uye Google Talkback Kurodha pasi
ari Zvishandiso zvekuwanika zveGoogle Talkback Android Izvo zvinowirirana neakawanda maApple Smartphones uye mapiritsi, zvichipihwa hunhu hwavo semasevhisi akagadzirwa kuti nharembozha dziwanikwe kune vanhu vakaremara.
Kuti udzibudise, unofanira kuenda kuGoogle Play Store woisa tsvakiridzo ku «Zvishandiso zvekushandisa zveApple«, Wobva wadzvanya« Isa »kuti uzviwane mumenu yekumisikidza yeSmartphone yako kana piritsi.
Mashandisiro eGoogle Tasks eApple